VILLAGE ORANGE AMBATONDRAZAKA: Mamaly ny filàn’ny mponina ireo foto-drafitr’asa · déliremadagascar
VILLAGE ORANGE AMBATONDRAZAKA: Mamaly ny filàn’ny mponina ireo foto-drafitr’asa
Socio-eco	 10 novembre 2020 R Nirina
Tontosa ny 07 novambra 2020 ny fanokanana ny « Village Orange » faha-27 ao Ambatondrazaka. Ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar no nanampy tamin’ny fanamboarana ireo foto-drafitr’asa. Fiarahamiasa tamin’ny « Léo Club » no nahafahana niroso tamin’izany. Lava-drano efatra mba hisitrahan’ny mponina rano fisotro madio no vita. Efitranon-tsekoly vaovao ihany koa no nanamboarina ho fanitarana ny EPP Ambaniala. Tamin’ny alalan’ity “Village Orange” ity ihany koa no nahafahana nanavao ny CSBII Ambandrika ary nahazo fampitaovana feno avy hatrany. Fandaharan’asa hanohanana ny lafiny sosialy sy toe-karena ho an’ny mponina ny “Village Orange” ka manampy amin’ny ampahany na feno amin’ny fanatanterahana ny foto-drafitrasa mamaly ny filàn’ny mponina any amin’ireo toerana lavitr’andriana. Zava-kendren’ny fandaharan’asa ny fisitrahan’ny mpiray tanana rano fisotro madio, fitsaboana ary fanabeazana. Nanomboka tamin’ny taona 2009, niompana tamin’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza ireo tobi-pahasalamana namboarina.
Ankoatra izany, notokanana tamin’io fotoana io ihany koa ny “centre de soins maman kangourou” tao amin’ny complexe Mère-Enfant an’ny Centre Hospitalier de Référence Régionale (CHRR) Ambatondrazaka. Hanampy amin’ny fandraisana an-tanana ireo zaza tsy ampy lanja sy teraka tsy tonga volana amin’ny alalan’ny fomba “kangourou” ity ivon-toerana ity.